Ogaden News Agency (ONA) – Dibadbaxyo Lagaga Soo Horjeedo Dhiibitaankii C/kariim oo Dhagaxlay Kaqabsoomay.
Dibadbaxyo Lagaga Soo Horjeedo Dhiibitaankii C/kariim oo Dhagaxlay Kaqabsoomay.
Waxaa goor dhawayd oo maanta duhurkii ah soo gabagaboobay mudaharaadyo waawayn oo subixii hore ee saaka oo Talaado ah kabilowday xerada qoxootiga Dhagaxlay ee deegaanka Dhadhaab.
Mudaharaadadan oo ay kasoo qayb galeen kumanaan shacabka Soomaaliyeed ah oo kudhaqan xerada qoxootiga Dhagaxlay, waxayna maanta dadwaynuhu muujiyeen sida ay uga xun yihiin falkii foosha xumaa ee ay kudhaqaaqeen maamulka Farmaajo ee uxuubsiibtay dabadhilif nimada.
Kumanaankii shacabka ahaa ee saaka isu soobaxay oo watay calanka Buluuga ah ee Jamhuuriyada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqayay erayo kadhan ah Farmaajo iyo Khayre, waxayna dadwaynuhu dalbadeen in ay is casilaan.
Dadwaynaha maanta isusoobaxay oo bilo yar kahor banaan baxyo taageero loogu muujinayo Farmaajo isugu soobaxay ayaa maanta sheegay in ay qalbi jabeen oo hankoodiina ay ku hongoobeen.
Dadwaynaha ayaa sidoo kale kudhawaaqayay Free Cabdi Kariim iyagoo baarlamaanka Soomaaliya kacodsaday in ay laxisaabtamaan dambiilayaasha dhiiga shacabka kaganacsada. Dhinaca kale dadwaynihii maanta dhagaxlay isugu soobaxay ayaa aad uga xumaa in Villa Somalia laga dhiibo halyay soomaaliyeed oo usoo dhaawacmay qaranka Soomaaliya.
Guntii iyo gunaanadkii banaanbaxyada ayaa si isku mid ah uga socday xeryaha qoxootiga ee Xagardheere, Ifo iyo Dhagaxlay waxayna dadwaynuhu si isku mid ah umuujiyeen dareen koodo wadaniyadeed.